Montenegro: manolo governemanta politika miaraka amin'ny governemanta manam-pahaizana
Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Montenegro: manolo governemanta politika miaraka amin'ny governemanta manam-pahaizana
Tany Montenegro, nandresy tamin'ny fifidianana ny mpanohitra tamin'ny alahady, ary hanana governemanta vaovao ny vahoaka Montenegro amin'ny farany. Teo amin'ny fitondrana nandritra ny 30 taona ny antokon'ny fitondrana.
"Ny tiana hambara dia ny iray amin'ireo rafitra tsy demokratika farany tany Eropa izay novaina tamin'ny fifidianana tamin'ny fomba milamina, izay tsy fahita firy amin'ny fiheverana ny harerahana ara-toekarena ao amin'ny firenena sy ny governemanta izay tsy azo ovaina nandritra ny am-polotaona maro," hoy izy Aleksandra Gardasevic-Slavuljica, Filohan'ny fananganana.travel any Balkan sy ny Hon. Consul ho an'i Seychelles.
Nanampy izy hoe: “Manantena aho fa hiova ny zava-drehetra manomboka rahampitso. Tsy nanaiky tamin'ny fomba ofisialy ny valim-pifidianana ny governemanta, saingy nilaza izy ireo fa izay mandresy amin'ny maro an'isa dia tokony tohanan'ny ambiny. Nilaza izy ireo fa hiandry ny valim-pifidianana ofisialin'ny Vaomieram-pirenena misahana ny fifidianana. Mety haharitra roa andro izany, nefa manantena aho fa hiafara amin'ny fomba milamina. ”
Nisy olona avy any Montenegro nilaza izany eTurboNews: “Tsy afaka manao zavatra hanovana ny safidim-bahoaka izy ireo. Heveriko fa afaka andro vitsivitsy dia hazava ny raharaha. ”
Hoy i Aleksandra: “Marina ny isan-jato. Na izany aza, 'For the Future of Montenegro' no firaisan-kinan'ny mpanohitra lehibe indrindra, tsy misy antoko Serba fotsiny. Misy antoko 7-8 ao. Ny lehibe indrindra dia ny mpanohana an'i Serba, fa ny sasany kosa tsy. Ankoatr'ity fiaraha-mitolona ataon'ny mpanohitra ity dia nisy firaisan-kinan'ny mpanohitra 2 hafa nifaninana ary ahitana firenena samihafa monina ao Montenegro izy ireo: Montenegro, Bosnianina, Serba, Albaney, Kroasia. Antokom-pirenena ireo fiaraha-mitolona 2 ireo. Na ny mpitarika ny iray amin'ireo firaisamonim-pirenena dia Albaney [iray]. ”
Ary koa, momba ny maro an'isa ao amin'ny Parlemanta (seza 41), tsy misy olana amin'izany satria nandritra ny fampielezan-kevitra dia nanondro ireo fanoherana politika 3 ireo fa amin'ny farany dia hiara-handeha izy ireo ary hamorona ny governemanta. Io no efa nohamafisin'ireo mpitarika 3 rehetra androany hariva. Ka tsy misy fisalasalana ny amin'ny governemanta ho avy. Nambaran'izy ireo mazava koa fa manam-pahaizana ny governemanta fa tsy mpanao politika, izay tsara. "
Nanontany tena i Aleksandra: “Mampalahelo fa tsy nanazava izany rehetra izany ny Reuters.”
Nitatitra ny Reuters: "Miorina amin'ny 100% ny vatom-pifidianana avy amin'ny santionan'ny biraom-pifidianana, naminavina ny CEMI fa ny vato aman-dalàna DPS dia nahazo vato 34.8%, raha ny firaisankinan'ny antoko nasionalista Serba indrindra," For the Future of Montenegro, "izay maniry akaiky kokoa ny fifandraisana amin'i Serbia sy Russia, dia teo aoriany 32.7%. Satria tsy misy amin'ireo mpifaninana roa lehibe indrindra no mahazo antoka ireo depiote 41 ao amin'ny parlemanta misy seza 81 mila hitondra irery, ka mila mitady mpiara-miasa izy ireo. ”
Avo ny taham-pahavitrihan'ny mpifidy, 75% ny mpifidy ho any amin'ny biraom-pifidianana, 3 no betsaka noho ny tamin'ny 2016, ary 11 no betsaka noho ny tamin'ny fifidianana filoham-pirenena 2018.
Montenegro dia niaina korontana ara-politika hatramin'ny volana desambra tamin'ny taon-dasa, raha ny lalàna maro an'isa DPS dia namoaka lalàna mifehy ny resaka fivavahana, notoherin'ny fiangonana ortodoksa serba mafy, izay nanasa ny mpikambana ao aminy hifidy hanohitra ny DPS. Ny fiaraha-mitolona manodidina ny Front Demokratika dia toa nahazo tombony be indrindra tamin'ny polarization nateraky ny lalàna. Ny DPS koa dia niaina fihetsiketsehana fanoherana ny kolikoly tamin'ny taona 2019.
Namarana ny teniny i Aleksandra: “Ankehitriny, ny antoko mbola eo amin'ny fitondrana dia mila miaiky ny fahavoazana, ary antenaina fa tsy hamorona fanodikodinana izy ireo. Araka ny fantatsika rehetra, izy ireo dia [niasa] nandritra ny am-polony taona maro teo amin'ny fototra hosoka. Ka antenaiko fa hanaiky fotsiny izy ireo fa resy tamin'ny fifidianana. Fihetseham-po tsara… miaraka amin'ny fanantenana fa honina amin'ny firenena afaka ato ho ato isika."
CeMI sy Ivotoerana ho an'ny tetezamita demokratika, izay nanara-maso ny andron'ny fifidianana, dia nitatitra tsy fanarahan-dalàna maro.
Ireo mpizahatany amin'ny sidina TUI avy any Greece mankany Wales dia mitondra Coronavirus mankany Britain